RASMI: Goolhaayaha Liverpool ee Simon Mignolet oo ku biiray koox cusub – Gool FM
RASMI: Goolhaayaha Liverpool ee Simon Mignolet oo ku biiray koox cusub
(Yurub) 05 Agoosto 2019. Kooxda club Bruges ee dalka Belgium ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la saxiixatay goolhaayaha Liverpool ee Simon Mignolet.
Naadiga club Bruges ayaa war ay ku soo qoreen website-kooda rasmi ah iyo dhamaan boggagooda baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter, waxay ku xaqiijiyeen in Liverpool ay ka soo qaateen gaalhaaye Simon Mignolet.
Warka ku saabsan ka tagista Simon Mignolet ee kooxda Liverpool ayaa waxay naxdin ku noqotay taageerayaasha Reds, kuwaasoo filayay in laacibkan reer Belgium uu baaqi ku sii ahaan doono garoonka Anfield xili ciyaareedka soo socda, kadib markii uu kooxda la qaatay mudadii isku diyaarinta xili ciyaareedka cusub.
Wargeyska “The Times” ee dalka England ayaa sheegay in heshiiska uu Simon Mignolet kaga soo dhaqaaqay Liverpool isla markaana uu ugu biiray Kooxda club Bruges uu ku jacahay 7 milyan oo euro.
Goolhaaye Simon Mignolet ayaa u waayay booskiisa kooxda Liverpool dhigiisa reer Brazil ee Alisson Becker oo xagaagii lasoo dhaafay kaga soo biiray naadiga reer Talyaani ee AS Roma heshiis taariikhi ah oo ay Reds ku qarash gareysay qiimo gaaraya £ 56 million.
Unai Emery oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Arsenal Philippe Coutinho
RASMI: Barcelona oo xaqiijisay in Lionel Messi uusan kooxda inteeda kale ula safri doonin dalka Mareykanka